Shirweynaha Mashruuca Belt & Road oo ka furmay dalka China • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirweynaha Mashruuca Belt & Road oo ka furmay dalka China
Shirweynaha Mashruuca Belt & Road oo ka furmay dalka China
April 26, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Mashruuca Belt & Road Initiative (BRI) oo ay wado dowlada China ayaa ah mid qorshihiisu yahay inuu isku xiro 3 meelood 2 meel wadamada Caalamka, iyadoo mashruucan saldhig looga dhigay maalgelinta wadooyinka iyo xiriirka ganacsi.
37 hogaamiye oo kamid ah dalalka mashruucan ka qeyb qaadanaya ayaa ku sugnaa xafladii furitaanka shirweynaha lagu daahfurayey mashruucan balaaran, waxaa sidoo kale shirkan ka qeyb galaya wafuud ka kala socda 150 wadan oo mashruucan ku jira.
Madaxweynaha China Xi Jinping oo shirkan kasoo jeediyey khudbad nus-saac socotay ayaa si adag u difaacay mashruucan oo ay horey shakiyo uga muujiyeen dalalka horumaray ee reer Galbeedka oo ku tilmaamay mashruucan mid ay dowlada China dooneyso inay dalalka soo-koraya ay ku khiyaanto Deynmo aysan bixin karin si ay awood balaaran ugu yeelato dalalkaasi deynta ka qaata.
Madaxweyne Xi ayaa sheegay in aysan waxna ka jirin dhaliilaha loo soo jeediyey dhankooda isagoona balan qaaday in qaab daah-furnaan ah loo maareyn doono mashaariicdan isagoona sheegay in dalka China uu qaadi doono tilaabooyin lagu dhiirigelin doono ganacsiga caalamiga ah iyo maalgashiga sida; joojinta lacagta ay ku kabaan warshadaha iyo shirkadaha reer Shiina oo ay horey cabasho uga keeneen dalalka kale ee wax-soo saara.
Shirka ka furmay China ayaa waxaa ka maqnaa inta badan dalalka reer Galbeedka sida Maraykanka iyo wadamada Midowga Yurub.
Dalka Soomaaliya oo kamid ah wadamada saxiixay inay ka qeyb qaadanayaan mashruucan Belt & Road ayaa waxaa uga qeyb galaya shirkan wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah Ambassador Jamal oo sheegay inay kulamo la yeelan doonaan maalgashayaasha shirka ku sugan iyo waliba madaxda dowlada Shiinaha.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa rajeenaysa in Shiinaha uu maalgashi ku sameysato dalka Soomaaliya isla markaana maalgeliyo dib u dhiska xarumaha dowlada ee magaalada Muqdisho. Shiinaha ayaa xiligii dowladii Militariga Soomaaliya maalgelisay 80 mashruuc sida Wadooyinka, Isbitaalo iyo xarumaha Sportska.
Xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa ahaa mid qarniyo soo jiray, kahor dhismihii Qaranka Soomaaliya ayuu dalka Shiinaha kamid ahaa wadamada xiriirka ganacsi la lahaa boqortooyooyinkii ka talin jiray dhulka Soomaalidu degto.
Shiinaha ayaa sidoo kale doonaya in ka faa’iideystaan badda Soomaaliya iyo qorshahooda ku aadan Bariga Afrika gaar ahaan isku xirka dekkadaha iyo kaluumeysiga.